पशुपतिनाथले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल आश्विन २६ गते शुक्रवार – Etajakhabar
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग श्रीसूर्य दक्षिणायन,शरदृतु,विरोधकृत् नाम संवत्सर,शाके १९४०,सम्वत २०७५ साल आश्विन २६ गते शुक्रवार नेपाल सम्बत ११३८ कौलाथ्व,सन् २०१८ अक्टोबर १२ तारिक शुक्लपक्ष तृतीया तिथि विहान ६ वजेर ५१ मिनेटसम्म,विशखा नक्षत्र अपरान्ह १ वजेर ५ मिनेटसम्म,प्रीतियोग,गरकरण,आनन्दादियोग मातङ्ग,सूर्य कन्या राशीमा,चन्द्रमा विहान ६ वजेर ५५ मिनेटसम्म तुला उप्रान्त वृश्चिक राशीमा । वारवेला,मुहूर्त र राशी
ॐःराहुकालः–अशुभ विहान १०÷२३ वजेबाट ११÷५० वजेसम्म रहनेछ,अशुभ यमघण्टायोगः–अपरान्ह २÷४३ वजेबाट ४÷१० वजेसम्म रहनेछ । गुली कालः–सामान्य विहान ७÷३० वजेबाट ८÷५७ वजेसम्म रहनेछ । दूरमुहूर्तः–अशुभ विहान ८÷२२ वजेबाट ९÷८ वजेसम्म र मध्यान्ह १२÷१३ वजेबाट १२÷५९ वजेसम्म रहनेछ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷२७ वजेबाट मध्यान्ह १२÷१३ वजेसम्म रहनेछ । ॐःसूर्योदयबाट प्रातः ७÷२९ वजेसम्म चर वेला,७÷२९ वजेबाट ८÷५६ वजेसम्म लाभ वेला,८÷५६ वजेबाट १०÷२३ वजेसम्म अमृत वेला,१०÷२३ वजेबाट ११÷५० वजेसम्म काल वेला,११÷५० वजेबाट १÷१६ वजेसम्म शुभ वेला,१÷१६ वजेबाट २÷४३ वजेसम्म रोग वेला,२÷४३ वजेबाट ४÷१० वजेसम्म उद्वेग वेला र ४÷१० वजेबाट सूर्यास्तसम्म चर वेला रहनेछ ।ॐःसूर्यास्तबाट ७÷१० वजेसम्म रोग वेला,७÷१० वजेबाट ८÷४३ वजेसम्म काल वेला,८÷४३ वजेबाट १०÷१६ वजेसम्म लाभ वेला,१०÷१६ वजेबाट ११÷५० वजेसम्म उद्वेग वेला,११÷५० वजेबाट १÷२३ वजेसम्म शुभ वेला,१÷२३ वजेबाट २÷५६ वजेसम्म अमृत वेला,२÷५६ वजेबाट ४÷२९ वजेसम्म चर र ४÷२९ वजेबाट सूर्योदयसम्म रोग वेला रहनेछ ।
मेषः– प्रातःकाल थोरै अनुकुल देखिए पनि समग्र दिन प्रतिकुल देखिन्छ । गरेका कामले पूर्णता पाउने छैन । लेनदेनका कुराले पिरोल्नेछ । मानसिक एवं शारीरिक दुर्वलता बढ्ने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ ।
वृषः–व्यापारबाट सामान्य लाभ हुनेछ । नयाँ कामको सम्भावना देखिन्छ । साझेदारी कामको लागि प्रस्ताव आउन सक्छ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । पारिवारिक सुख,शान्ति मिल्नेछ । विदेश यात्राको योग देखिन्छ ।
मिथुनः– कार्य सम्पादनमा कठिनाई आउन सक्छ,धैर्यतापूर्वक काम गर्नु होला । आज गरेका काम सफल हुनेछन् । मुद्धा मामिलामा विजय हात लाग्नेछ । अहार विहारमा ध्यान दिनु होला नत्र स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ ।
कर्कटः– अन्योलता बढ्न सक्छ भ्रमलाई चिरेर अगाडि बढ्नु होला । यात्रामा कष्ट हुने देखिन्छ । अरुको भरोसामा मात्रै काम नगर्नु होला । एउटा एउटा चिन्ताले छोड्ने छैन । व्यापारबाट सोचे जस्तो लाभ हुने छैन ।
सिंहः– पारिवारिक भेटघाट बढ्नेछ । काम गर्ने जोश,जागर घट्न सक्छ । लगनशिल भई काम गर्नु भएको खण्डमा थोरै भए पनि सफलता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट सोचे जस्तो लाभ लिन सकिने छैन ।
कन्याः–समय बलवान देखिन्छ । गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछ । जस्ता सुकै समस्या आए पनि खेल्न सकिनेछ, समाधान हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रै होला । आफन्तजनको सहयोग पाईने छ ।
तुलाः– प्रयत्न गरेमा काममा सफल मिल्नेछ । समयमा सचेत हुनु आवस्यक छ । आर्थिक कारोवार गर्दा होशियार रहनु होला । घरमा सुख शान्ति कम मिल्नेछ । आम्दानी खर्चको सन्तुलन कायम रहनेछ ।
वृश्चिकः– मन वचन र कर्मले लाग्नु होला अवस्य सफल हुनुहुनेछ । उत्तम आसन र भोजन प्राप्तिको योग देखिन्छ । साना तिना समस्यामा नअल्झि काम गर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ ।
धनुः–काम गर्ने बातावरण भत्किनेछ । काम काजमा विभिन्न खालका अवरोध आउने छन् । विश्वास गरेकाले धोका दिने छन् । आर्थिक पक्ष दुर्वल बन्नेछ । गलत विचार बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ ।
मकरः– गोचरबाट दिन अनुकुल नै देखिन्छ । पराक्रम बढ्नेछ । नसोचेका ठाँउबाट धन आउनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रो हुनेछ । जीवन साथीको सहयोगमा आर्थिक उन्नति हुनेछ । मान्य जनको आशिर्वाद मिल्नेछ ।
कुम्भः– आत्मविश्वास बढ्नेछ । लगनशिल भई काममा लाग्नु होला । विगतमा देखिएका समस्याहरु समाधान भएर जानेछन् । विरोधी आफै गलित हुनेछन् । सहयोगी मन भेटिने छन् । परिश्रमको फल राम्रो निस्कनेछ ।
मिनः– समयमा सामान्य सुधार आउनेछ । उपलब्धिका काम कम हुनेछन् भने सहयोगी काम बढि हुनेछन् । फलदायी यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । परिवारजनको सहयोग थोरै मिल्ने देखिन्छ । गलत विचारको अन्त्य हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन २५, २०७५ समय: २०:१०:१४
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन ६ गते सोमबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : यो साता तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशीफल फाल्गुन ५ गते देखि १० गतेसम्मको
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन ५ गते आइतबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन ४ गते शनिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन ३ गते शुक्रबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन २ गते विहिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन १ गते बुधबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल माघ २९ गते मँगलबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल माघ २८ गते सोमबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
तीनदिन प्रजातन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी भव्यतासाथ मनाइने
बझाङमा जीप दुर्घटना स् दुईजनाको ज्यान गयो , ९ जना घाइते
छाया कम्प्लेक्स निर्माण : कमलपोखरीको जग्गा हत्याउन सत्ता र शक्तिको व्यापक दुरुपयोग
जेठी हुँदा हुदै कान्छी भित्र्याउदा नवदम्पती पक्राउ
माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न : असारभित्र ६० मेगावट विद्युत् उत्पादन